Iconic machechi uye dzimba In Europe | Save A Train
musha > Travel Europe > Iconic machechi uye dzimba In Europe
Iconic machechi uye dzimba In Europe
kubudikidza Gor karapetyan
Europe ndiyo yakakurumbira pakati vamwe zvinhu zvayo mapurani uye nhoroondo dzemamongi izvo zvine nhoroondo kukosha munyika.
Nyaya iyi yakanyorwa kudzidzisa pamusoro Train Travel uye chakaitwa Save A Train, The CHEAPEST Train Tickets Website In The World.
Noravank, Vayots Dzor Province (Arumeniya)
Noravank ndomumwe kupfuura nhoroondo uye iconic yemamongi zvivako munzvimbo Vayots Dzor dunhu. Kereke iri akapoteredzwa unopinza tsvuku matombo, uye zvinoshamisa girl nderimwe yakanakisisa zvikonzero pasura Armenia. The Nhoroondo Noravank yakavakwa ari 13fung remakore uye nzira "Wemamonk New" muna Armenian. Wemamongi yakava muzinda wetsika uye dzidzo Armenia.
Tatev Monastery, Syunik Province (Arumeniya)
Tatev mumwe zvishongo Armenian mapurani. Wemamongi yakavakwa muna 9th-remakore rechi13 kwaiva muzinda inodzidzisa uye ane nhoroondo zvainoreva Armenian nhoroondo. Zita wemamongi ane inonakidza mavambo. Pane zvakanaka uye touchy ngano pamusoro tenzi uyo akavaka wemamongi. Aida kuona Paaidzidzisa yake kubva kudenga uye vachida kuti mapapiro Mwari kumupa mapapiro yaakabvunza.
Mwari akateerera minyengetero ake uye akamupa mapapiro yakanaka. Shoko "Tatev" rinoshandurwa se "Kupa mapapiro". Kamwe iwe shanyira wemamongi unozonzwa chairo rinoreva. The monastery is surrounded by deep gorges from all sides. The Armenian Church played a significant role in Armenians religion and culture. Svosve mhando Armenian remunharaunda rwavakaita kuchakupa mukana wokuongorora mukuru nyika.
Sagrada mhuri, Barcelona (Speini)
Sagrada mhuri ndiyo akashanyira kereke iconic kuSpain. Kuvaka shongwe pamutemo yakatanga 1882. Architect Francisco de Paula del Villar designed in a classic Gothic style. asi, mu 1883 Antoni Gaudi vakachinja chirongwa uye kuvaka ano akitekicha riri inozivikanwa munyika. Construction aigona kupera muna 2026, nokuti Centenary kuti Antoni Gaudi afa.
The mapurani akanga aronga kuvaka 12 shongwe, vakazvitsaurira kuna Jesu Kristu uye Vadzidzi, mumwe amai vaJesu, mana kuti zvichengete vaEvhangeri. pari zvino, vapedza shongwe sere. Inside chechi, Gaudi akagadzira mbiru ari chimiro muti tetepa hunde dzacho dzinoita dondo Style. Kubva pamusoro petemberi, unogona kuona fadza maonero muguta.
Borgund kudzivisa, Borgund (Noweyi)
church in ndiyo varipo kupfuura anotyisa kuNorway. Zvinonzi dzakavakwa 1180 uye kuna Apostle Andrew. Izvi mhando machechi zvinokosha iconic Zvivako kuNorway mapurani. Vamwe zvayo yaigona hunhu ndivo pachena zvakavezwa nezvikumbaridzo uye michinjikwa uye mifananidzo zibukanana kuti vakuru pamusoro matenga. Style Izvi kunyenga dzekuma Scandinavia uye akashandiswa muBritain zvakare.
Nzvimbo iri wakakomberedzwa nhaka rinokosha akapfuma. Vindhellavegen ave pedyo nechechi uye kunoratidza yakanaka kufamba mikana. mugwagwa uyu nenhoroondo akanga paakavapa "Nzira muNorway yakaisvonaka" nokuda Norwegian Public Roads Administration mu 2014.
Duomo, Milan (Itari)
Duomo riri kuchamhembe chikamu Milan, ichi pakukura Cathedral chimwe chezvinhu zvikuru uye anoyevedza hurongwa munyika. Ishe uye Bhishopu Mukuru kuMilan tinoda kuvaka rakasiyana Cathedral kuti aizoita rudzi kunzwa kubwinya kwaMwari uye guta kubatanidza. Nokuti kuvakwa Duomo yaisanganisira Makontakta, navapfuri vesimbi, uye mhizha dzinobva mhiri Europe. Zvakaitika mushandi mumwe nomumwe uye kushingaira akabatsira kusika International Gothic Duomo.
nemanyorero aya kunoratidzwa nokukwirira uye kunoshamisa chishongo. Around chacho zviri pamusoro 3400 yakanyungudutswa, 135 gargoyles, uye 700 machena nhamba kuti zvaizobatsira Duomo. From soro urengarenga, apo unogona kukwira masitepisi kana kutora chikwidzo, muchaona wakanaka Madonnia, yendarama kumiririrwa pechifananidzo chaMariya uye mazuva zvakajeka vanogona mukare maonero pamusoro Milan.
KuGenoa kuna Milan Zvitima
Rome kuna Milan Zvitima
Bologna para Milan Zvitima
Verona kuna Milan Zvitima
Hallgrimskirkja, Reykjavik (Aisirendi)
Hallgrimskirkja chechi ndiye wepamusororsoro uye kupfuura chivako Reykjavik uye chinooneka muguta rose. Kereke ine 74,5 mamita mukuru uye vashanyi anogona kupinda chechi uye kunakidzwa akakura maonero. kuvaka chivako zvakatanga muna 1945 uye kuvakwa 1986. Kereke modernist zvakafanana ari basalt dhaka runoyerera apo dhaka inotonhodza mudombo.
The pombi muri kure emirayiridzo mana chitiviri. Pane 102 pamisara, 72 Kumira, uye 5275 nenyere uye 15 mamita reba, anoyera pamusoro 25 zvenzwi. Chivako chiri simba uye anokwanisa rokuzadza vatsvene uye hombe nzvimbo. Kuvakwa nhengo rakapera muna 1992 uye rakashandiswa zvakasiyana-siyana zvakarekodhwa.
Wagadzirira kuona vamwe Machechi iconic And dzemamongi In Europe? Unogona kuwana zvose nzvimbo izvi nyore achibatsirwa Save A Train ! With hapana chakavigwa mamwe mari, uchawana zvakawanda kupedza pamusoro Vatasvi zvikuru uye nguva dzakanaka!
Unoda embed yedu Blog pambiru zviende yako nzvimbo, unogona kana kutora mapikicha edu uye rugwaro uye chete tipei chikwereti ine kubatana iyi Blog romukova, kana tinya pano: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ficonic-churches-and-monasteries-in-europe%2F%3Flang%3Dsn- (Mupumburu pasi zvishoma kuona Embed Code)
Kana uchida kuva nomutsa vanoshandisa dzenyu, unogona kuvatungamirira zvakananga kunyika yedu mapeji kutsvaka. In batanidzo ichi, muchawana yedu rinofarirwa kupfuura chitima pakutengeserana – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Inside uine Links edu Chirungu kumhara mapeji, asi isuwo tine https://www.saveatrain.com/fr_routes_sitemap.xml uye iwe unogona kuchinja / ja kuti / of kana / nayo uye mimwe mitauro.
#Makereke #Monasteries europetravel famba
I am a travel blogger and also a travel agent. I love to travel for the adventure and explore this wonderful world - Unogona baya pano ndibate
5 Most Famous Streets In Paris To See
Rovedza Kufamba France, Travel Europe
Best Mavandhiro Destinations In Europe
London To Paris In 2:20 maawa NaIroostar Chitima
Rovedza Kufamba France, Chitima Kufamba UK, Travel Europe
10 Nzvimbo Dzakanakisisa Dhivha MuNyika
10 Awesome Vacation Rental Nzvimbo MuEurope
8 Yakanakisisa Ekuzvarwa Mazano
10 Vazhinji Vanoda Vakaroora Vanofamba
pamusoro 10 Nzvimbo Dzakavanzika Munyika